Vary misy taolan-tehezana - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
-BARY58 minitraOlona 4
Naheno momba ny hatsaran'ity vary misy taolan-tehezana ity foana aho ary tena te-hanomana azy satria fantatro izany ho tian'ny fianakaviako izany ary dia izany tokoa.
Resipeo io tsotra tsotra ary ny ankizy dia tia azy amin'ny "chicha" araka ny filazany.
Ny varimbazaha ao amin'ny Thermomix® dia mendri-kaja. Tsy maninona na a vary fotsy, un risotto na a vary lasopy tsotra sy matsiro daholo.
1 Vary misy taolan-tehezana
Vary tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Fotoana hiketrehana: 58M
Fotoana manontolo: 58M
Menaka oliva virjiny 100 g fanampiny
Taolan-tehezan-kisoa 500 g, tapatapahina kely
1-2 jirofo tongolo lay
150 g tsaramaso maitso
100 g voatabia voatoto, am-bifotsy na voajanahary
Rano 1000 g
Saffron na fandokoana sakafo 1 pinch
Dipoà mena 150 g, tapatapahina
Napetrakay tao anaty vera ny tongolo lay ary notetehinay tamin'ny alàlan'ny fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Ampiarahinay ny menaka sy ny taolan-tehezana. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Ampio ny tsaramaso maitso voatetika sy voatabia voatoto ao anaty vera. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, maripana varoma, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Ampio ny paprika, rano, safrona (na fandokoana) ary sira. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Farany dia ampianay ny dipoavatra mena sy ny vary. Izahay dia manao fandaharana 13 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganam-pandrefesana.
Rehefa vita dia jerentsika ny toerana misy sira. Avelao hijanona minitra roa ary hanompo.
Fanazavana fanampiny - Handravaka vary fotsy miaraka amin'ny fofona mandarin sy karatra / Ny risottos tsara indrindra vita amin'ny Thermomix® / Vary ranon-dranomasina
Loharano - Vary Levante Thermomix®
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Celiac, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, 3 taona mahery, Latsaky ny 1 1/2 ora
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Vary misy taolan-tehezana
93 hevitra, avelao ny anao
smyrna dia hoy izy:
satria tiako ny bilaoginao isan'andro dia mijery azy imbetsaka aho ary efa nanao resipeo, tiako ho apetrakao (raha azo atao) ny programa ho an'ny TH 21 izay ananako, misaotra betsaka ary tohizo manampy hampiasa TH izay hadinonay sasany tao an-dakozia.
Mamaly an'i Smyrna
Smyrna raha hanao an'ity fomba fahandro ity amin'ny Tm-21, tsy maintsy apetrakao amin'ny lolo sy ny hafainganam-pandeha 1 ny lolo.
Salama daholo / ianareo nanome ahy ny tx 31 ary matahotra aho ny hametraka azy io noho ny olana mavesatra, misy fomba hanaovana ireo fomba fahandro mahazatra nefa tsy mila refesina tsara, tiako ihany koa ny fomba fahandro ho an'ny sakafo hariva mahasalama. ho an'ny ankizy satria ny ahy dia mihinana sandwich na pizza mitovy ihany foana. Misaotra tamin'ny fiarahabana an'ity tranonkala ity
Mar, tsy fantatro tsara hoe inona no tianao holazaina amin'ny fandrefesana ireo fangaro marina. Ny tena lojika sy be indrindra eo am-piandohan'ny fananana ny thermomix dia ny fijanonanao amin'ireo resipeo sy ny lanjany apetraka aminao. Avy eo rehefa mandeha ny fotoana dia mahazo ny fihantonany ianao ary rehefa lazain'izy ireo aminao tongolo 200 grama, dia saika tsy lanjao dia maka ilay tongolo izay manakaiky io lanja io ianao.
Tiako ny manomana fomba fahandro marobe amin'ny sakafo hariva amin'ny lasopy, menaka legioma, trondro kely ... jereo ny index ary hahita vitsivitsy sy tsotra ianao.
Salama Silvia, manana ny sakafo aho anio satria tsy misy sap izay tokony hatao fa tsara be ry zareo ary tsara ho ahy ihany ny vary, hoy aho aminao, FIOMPIANA
Mari Carmen, andramo izany, fomba fahandro tena tsotra ary mivoaka tsara ny vary.
Lucia Martinez placeholder sary dia hoy izy:
Ny vary dia tena tsara, efa nataoko indroa tianay daholo ... ny zavatra tsy mbola napetrako ny lolo efa hitako tamin'ny hevitra tokony hametrahanao azy.
Valiny tamin'i Lucia Martinez
Manana ny fomba fahandro faha-21 momba ny 21 th aho?
Antonia miaraka amin'ny tm-21 dia azonao atao ihany koa ny manamboatra an'io fomba fahandro io, tsy maintsy apetrakao amin'ny lolo fotsiny ny lolo sy ny hafainganana 1.
lola Sanchez dia hoy izy:
Tiako ny resinao indrindra ny tsindrin-tsakafo, misaotra
Mamaly an'i lola Sanchez
Lola, misaotra betsaka anao nanaraka anay. Tianay koa ny tsindrin-tsakafo, boka izany. Fa amin'ny ankapobeny dia mikatsaka ny hizara azy ireo amin'ny olon-kafa foana izahay mba hikarakarantsika kely ny tenantsika.
ity vary ity dia miteny hoe mihinana ahy ato an-tranoko fa tianay ny vary amin'ity herinandro ity
Tania, ity lehibe ity dia matoky fa ho tianao io, hoy ianao amiko.
Toy izany koa no mitranga amiko toa an'i Izmir (manana ny TH 21 aho). Faly be izahay fa raha milaza aminay ianao hoe inona ny fiovana afaka manamboatra ny fomba fahandro.
Susana rehefa apetratsika ny hafainganam-pandehan'ny sotro ary mihodina miankavia, miaraka amin'ny Tm-21 dia tsy maintsy apetrakao amin'ny lolo ny elatra sy ny hafainganana 1.
Misaotra anao! Mariho !!
Tena tsara ny nataoko omaly, tena tianay ny taolan-tehezana, nivoaka malefaka be tamiko izy, ny hena niaraka tamin'ny thermo dia tsy nivoaka moramora ary nanana ny fisalasalako momba ny fomba hiafarany aho, nefa, tena tsara, tena nanolotra izany aho, misaotra ny fomba fahandro
Alicia, faly aho fa nanao izany ianao. Ny marina dia rehefa nahavita an'io aho dia nanana fisalasalana ihany koa fa ny taolan-tehezana mivoaka be sy be ranony.
Miarahaba anao ary misaotra anao nanaraka anay.
Toa mahafinaritra tokoa ny hanandramako azy .. misaotra
Mari, raha andramanao dia averinao. Mivoaka matsiro izy io. Tian'ny fianakaviako izany, nataoko izany 15 andro lasa izay ary androany dia nanontany ahy indray izy ireo.
Vao avy nihinana azy izahay ary matsiro sy marina. Recipe tonga lafatra. Misaotra betsaka anao nizara an'io.
Faly be aho fa nahasoa anao io. Ny marina dia fomba fahandro tena mahomby.
Misaotra anao nanaraka anay
Sylvia dia hoy izy:
Salama, vao azoko ny thermomix nataoko taorian'ny 4 taona nieritreretana ny hividy azy, raikitra aho ary manantena aho fa hanampy ahy amin'izay vitanao ianao.
Mamaly an'i sylvia
Miarahaba anao Sylvia amin'ny fividiananao vaovao. Izy no mpiara-miasa aminao tsara indrindra ao an-dakozia, ho faly ianao. Ary izahay kosa dia hanao izay rehetra azo atao amin'ny alàlan'ny fomba fahitanay hanampiana anao. Efa elaela izay no nanamboarako an'io recette lazainao ahy io, raha vao ampirisihina aho dia hamoaka azy.
Aida dia hoy izy:
Voalohany dia tiako ny milaza, miarahaba anao amin'ity tranonkala feno sy mahafinaritra nataonao ity ary ny faharoa dia…. Ny vary dia mivoaka tsara ho ahy !! Misaotra betsaka amin'ny recette !!
Faly aho fa nahafantatra an'ity tranonkala ity ary, fantatrareo, fa nanolotra izany ho an'ny olona maro manana Thermomix aho !!
Valiny tamin'i Aida
Aida, misaotra betsaka anao nahita anay sy nanoro hevitra anay. Faly aho fa nankafizinao ny vary, tianay koa izany. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka noho ny resipeo, nanamora ny fandrahoan-tsakafo ianao, nividy ny Thermo aho ary ny marina dia gaga aho, androany no nanaovako ny vary ary nahafinaritra izany, tian'ny fianakaviako nahafinaritra tokoa izany.
Faly be aho, Monica. Manantena aho fa tianao ny resinay ary manampy anao hampiasa betsaka ny Thermomix izy ireo. Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
gem villegas lopez dia hoy izy:
tsaramaso maitso dia mety ho vilany na voajanahary
Valiny ho an'i Gema Villegas Lopez
Ny voa, voanjo maitso dia voajanahary.
INMA dia hoy izy:
Vaovao i Inma amin'ity pejy ity, fanontaniana iray ve ianao manatsara ny taolan-tehezany ora vitsy talohan'izay mba handraisany tsiro toy ny hena, sa tsy izany? fiarahabana
Valiny amin'ny INMA
Maria Pilar Molina - Prados Mora dia hoy izy:
Izaho dia vaovao amin'ny pejinao, ary ny marina dia tena tiako ny mahita ny habetsaky ny fomba fahandro mahazatra nahandroananao, manana thermomix kely nilaozana aho antenaiko fa noho ny hevitrao dia ampiasaiko bebe kokoa izany, heveriko fa miaraka amin'ny isa ny fomba fahandro izay hapetrakao ho ahy any an-dakozia. Miarahaba sy miarahaba.
Valio to maria pilar molina - prados mora
Tongasoa Maria Pilar !! Azo antoka fa eo anelanelantsika rehetra dia hampiditra anao amin'ny thermos indray izahay, satria ratsy io. Teneniko anao. Manaova fomba fahandro ary lazao aminay ny fomba. Mirary ny soa indrindra
Hanao an'ity lovia ity aho izao ary manana fanontaniana aho, raha ataoko mangatsiaka dia ho tsara ve izany avy eo?
Elena, ny tena marina dia tsy mbola nanao ranomandry aho, nefa tsy hitako izay satria tsy tokony hohanina ny vary toy ny fanaovany azy mba tsy hihoaran'ny rano. Ny azonao atao ary mihintsy ny hatsiaka ary avy eo ampiasaina dia ny endim-bary amin'ny vary rehetra. Na izany aza, tsy hangatsiaka vary mihitsy aho, afa-tsy ny fotsy.
Salama zazavavy !!! Te hanontany anao aho hoe inona ny saosy na ny fomba fanaovana taolan-tehezana fa tsy miaraka amin'ny ovy na vary, ao an-tranoko dia tsy dia tianay izany ary ny reniko izao dia mamporisika ny tenany hahandro amin'ny thermomix izay nilaza tamiko izy hitady fomba fahandro hahitana ny fomba fanaovantsika fanavaozana ao an-trano, misaotra !!!
Lorena, nanandrana nitady resipeo taolan-tehezana ianao, fa ny ankamaroan'izy ireo dia misy ovy na vita amin'ny vary. Hijery hatrany aho ary raha mahita aho dia holazaiko aminao. Mirary ny soa indrindra
tsara ny tolakandro, ataoko am-pisakafoanana izany indraindray, tianay ny arahaba fiarahabana
Hevitra tsara Carmen, tokony andramantsika amin'ny manaraka izany. Mirary ny soa indrindra
Ny vary fotsiny no nataoko dia nivoaka tsara izy, saingy somary henjana kosa ny taolan-tehezana. Nanana izany aho raha mbola nilaza ny resipeo, misy fika ve hampiasana azy ireo ho malemy paika kokoa?
María, niaraka tamin'ny fotoan'ny resipeo, dia nanjary tsara ho ahy izy ireo, fa raha te-hametraka kely kokoa ny taolan-tehezana amin'ny manaraka ianao alohan'ny hanampiana ny vary.
Katrina dia hoy izy:
Izaho dia nanana thermomix nandritra ny andro vitsivitsy ary ity no nahandro voalohany ahy. Tena mety ny vary sy ny taolan-tehezana ary matsiro. Amin'izao fotoana izao dia manana ny fomba fahitanao ny mofomamy cola-cao ao anaty lafaoro aho, holazaiko anao ny vokany. Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo, mbola hanohy hanao azy ireo aho.
Valiny amin'i Katrina
Silvia, namboariko io vary io hohaniko anio, ary tsy nataoko taolan-tehezana fa namboariko niaraka tamin'ny akoho notetehina sy saosisy mena. Namboariko kely ny fotoana, satria ny polo masaka talohan'ny taolan-tehezana, ary tena tsara ny vokany. Oroka sy fisaorana indray amin'ny hevitra omenao anay isan'andro
Hevitra tsara izany, tsy maintsy porofoiko tsara fa toy izany ny zanako kely. Mirary ny soa indrindra
jolin !!!! matsiro ny vary, misaotra !!!
Salama, te hahafantatra aho raha afaka manamboatra ny fomba fahandro manontolo hatramin'ny dingana farany voalohany, satria tiako ny hanao izany amin'ny asabotsy fa manana baolina kitra miaraka amin'ny zanako lahy aho ary avelany maraina, ary rehefa miverina aho, amin'ny adiny iray sy sasany dia ampio ny vary sy ny dipoavatra, na raha ny mifanohitra amin'izay no tsy atolotra azy.
Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra, tiako ny pejinao.
Mar, miala tsiny amin'ny tsy famaliako anao aloha fa indraindray be dia be ny fanontaniana izay toa efa voavalinay saika ny olona rehetra ary misy amintsika mandalo nefa tsy mahita azy ireo.
Afaka manao araka ny nolazainao ianao, avelanao ho voaomana daholo ary rehefa miverina ianao dia manao ny dingana farany amin'ny fampidirana ny dipoavatra sy ny vary. Lazao aminay ny fomba fiasan'izany ho anao.
Salama, omaly aho nanomana an'ity vary ity hohanina, matsiro.
Fanontaniana iray, maninona na voahosotra ny taolan-tehezana na tsia?
Miarahaba ary misaotra betsaka anao amin'ny resipeo.
Ana, tsy maninona na mampiasa marinitra ianao na tsia, ny hany zavatra tokana dia ny marinina dia manome tsiro manankarena be koa.
Salama! Mahafinaritra izany, tsy azonao an-tsaina ny fomba anampianao ahy amin'ny resipeo. MISAOTRA BETSAKA.
Conchi, tena faly aho fa amin'ny fomba fahitanay dia manome tanana anao amin'ny menus isan'andro izahay. Misaotra anao nanaraka anay. Mirary ny soa indrindra
mitokana ny girona dia hoy izy:
Ny marina dia matsiro izy io, saingy tiako ho fantatra ny vola ho an'ny olona 6.
Mamaly an'i soledad de girona
Izany no habetsaky ny haben'ny vera thermomix. Ny sakaizan'ny bilaogy sasany, dia namporisihina hampiakatra ny habetsaky ny vary ary haneho hevitra fa be loatra izany.
Tiako ny milaza aminao fa tena tsara ny recette, ny marina dia isaky ny maka resipeo aho dia tsara be, misaotra betsaka.
Valiny amin'i RACHEL
Faly aho fa tianao ilay izy!
Ankizivavy fahombiazana izany, miarahaba anao aho satria misakafo manokana ny vadiko ary tena tsara! Nosoloiko peppers maintso ny tsaramaso maitso.
Oroka ary manaova fahavaratra tsara EFA MAZAVA REHETRA !!!!
Faly be aho fa tianao izany. Ny tena marina dia resipeo tena feno izy ary mivoaka matsiro.
Ny vary fotsiny no nataoko dia nanandrana teo akaikin'ny tsinontsinona izy io, na dia nanampy sira bebe kokoa aza aho tamin'ny farany. Tena hafahafa amin'ireo akora rehetra ananany nefa tsy nisy tsiro izany. Hafahafa be ... Ny ankamaroan'ny resipeo dia mivoaka tsara nefa miaraka amin'io dia tsy haiko izay nanjo ahy.
Voahosotra ny taolan-tehezana ?? Raha tadidiko tsara izay manome tsiro manokana azy, saingy hafahafa amiko satria mivoaka be ity vary ity.
fa olona firy ny taolan-tehezana? MISAOTRA
Ho an'ny olona 4
Salama!!! Roa ambin'ny folo taona ny tm 21 ary tsy nahandro firy tamin'ity herinandro ity taorian'ny nahitako ny bilaogy. Misaotra betsaka!!!!
Mamaly an'i ladybug
Misaotra betsaka Mariquita, fahafinaretana !! Ary tongasoa, mazava ho azy.
Naomy Badalona dia hoy izy:
Salama… .Ny fanindroany izao no anaovako an'ity recette ity ary tianay ato an-trano… ankoatry ny vary amin'ny thermomix dia mivoaka tsara izy io… .Manao resipeo maro eto aho satria tiako be izy ireo ary ankoatran'ny recette voasoratra tsara.! Oroka.
Valiny tamin'i Noemí Badalona
Misaotra betsaka noho ny hevitrao ry Naomy!. Niara-niasa vetivety tao amin'ny bilaogy aho saingy efa narahiko hatry ny ela ... ny tena izy dia nanao izany ireo mpiara-miasa amiko ary mahavita azy tsara izy ireo. Manantena aho fa hametraka risotto tsy ho ela toy ny ataon'izy ireo any Italia, izay tena matsiro ihany koa.
Salama…. Ao an-trano dia tena tianay ny vary, ny vadiko dia avy any Ekoatera ary eto ny vary dia toy ny mofo eto, mihinana isan'andro izahay ... ary te hanao lovia mahazatra toy izany koa aho avy eo miaraka amin'ny thermomix ... resipeo tiako holazainao hanaovana azy amin'ny thermomix-ko satria mora sy haingana kokoa .... Misaotra betsaka. oroka.
Tiako ity momba ireo kolontsaina samihafa momba ny gastronomika… Na iza na iza mahalala ny azy dia mety hieritreritra izy ireo fa mihinana toa ny ataony any amin'ny fireneny ihany, ary tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana! Nijery kely manodidina ny harato aho ary hitako ity pejy ity http://www.mis-recetas.org/recetas/advanced_search?dificultad=1&internacional=157&page=2
Azonao atao ny mijery mijery ny hevitrao. Na dia tsy natao ho an'ny Thermomix aza ny fomba fahandro, azo antoka fa misy ny sasany azonao ampifanarahana.
Manantena aho fa hitanao fa mahasoa!
Misaotra betsaka Ascen tamin'ny fanampianao… .kisses.
Betsaka ny rano sisa tavela ato amiko, efa nivoaka ny vary.
Salama Elena! Raha mijery ny sary ianao dia somary lasopy. Ny Thermomix dia tsy afaka manao vary maina tanteraka. Fomba tantely na lasopy foana izy ireo. Raha ny anao, raha tianao ny maina kokoa dia esory mandritra ny minitra vitsy ilay bikabeta ary betsaka ny rano ho etona. Holazainao amiko !!
Rebbe Lehibe! Misaotra tamin'ny hevitrao. Oroka!
Salama Mufasaataca, ny vary tokony hampiasanao dia ny bomba na ilay boribory fa tsy ilay lava. Izahay dia mitahiry izany ho an'ny salady mangatsiaka. Misaotra nanaraka anay. Mirary ny soa indrindra.
Luz ABILLEIRA PEREZ dia hoy izy:
Manana ny tm21 azoko an-tsaina aho fa tsy maintsy mametraka ny hafainganam-pandeha 1, izany tokoa ve? MISAOTRA
Valio i Luz ABILLEIRA PEREZ
Marina ny anao. Amin'ny TM21 dia tsy maintsy apetrakao ny throttle sy ny hafainganana 1.
Misaotra anao nanaraka anay!
hoditra dia hoy izy:
Izaho dia manana fisalasalana foana momba izay vary hampiasako. Matetika aho mampiasa ny SOS mahazatra amin'ny fiainako rehetra ary manala azy aho. Inona no marika ampiasainao.
Valiny tamin'i Pele
Salama Pele, miaraka amin'ny vary SOS ao anatin'ny 13 minitra dia mivoaka tsy vita izy io? Tena tsy fahita izany satria amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny 13 minitra dia tokony ho al dente (hoe somary iray manontolo ny atiny) ary raha avelantsika hiala sasatra dia vonona. Azonao antoka fa nametraka 13-15 minitra ianao? Zahao amin'ny manaraka ary raha tsy izany dia apetraho kely kokoa ny fotoana. Nampiasako ny SOS sy ny marika hafa, ary ny marika fotsy ihany koa ary miaraka amin'ireo fotoana ireo dia mety tsara izany. Lazao amiko raha afaka mamantatra izay tsy mety amin'ny varinao izahay. Famihinana.
Misaotra betsaka anao mamaly
Hiezaka hifehy tsara ny fotoana aho
Susana Llorente Lorido dia hoy izy:
Uhm inona ny sary hosodoko. Mampiasà ny thermomix amin'ny zavatra vitsivitsy aho, saingy mahita ny fomba fahandro anao aho.
Valiny tamin'i Susana Llorente Lorido
Cesar dia hoy izy:
Susana tiako ihany koa io, raha te-hihinana sakafo maro sy isan-karazany.
Valiny amin'i CESAR
Irina dia hoy izy:
Salama. Fantatro fa efa ela no navoaka ny recette nefa tiako ho hita raha hatao an'olona roa ity vary ity dia tsy maintsy notapahiko roa fotsiny ny fangaro rehetra ary raha miova ny fotoana ??? Misaotra betsaka anao nanampy ahy.
Mamaly an'i irina
Salama Irina, tsy misy zavatra mitranga satria efa ela no navoaka ny recette! Raha ny marina, faly izahay fa manomana ny fomba fahitanay, na ankehitriny izy ireo na tsia. Ho fanampin'izany, mahafinaritra ity lovia ity. Raha ahenao ny antsasaky ny habetsany dia homena anao ho an'ny olona roa izay misakafo tsara, dia lovia tokana io. Na izany aza, tsy maintsy tazonina mitovy ny fotoana. Ny voam-bary iray dia mila fotoana fandrahoana mitovy amin'ny voamadinika 100. Azonao lazaina aminay ve ny vokany? Misaotra nanoratra anay 🙂
Tiako ity fomba fahandro ity!
Fototra iray ao an-tranoko indray mandeha isan-kerinandro io, vita amin'ny akoho, taolan-tehezana, bitro… ..
mihantona amin'ny resinao isan'andro
Salama, te hahafantatra aho raha apetrakao ny tsaramaso maitso vao, efa masaka na vilany, satria raha vao madio dia tsy hivoaka ho malemy izy ireo, marina? Misaotra
Susana manaiky tanteraka aho,
Salama! Vary ity resipeo ity, iray amin'ireo ankafizinay ato an-trano, ataoko saika isaky ny alahady. Ampiako tongolo iray manontolo hatrany am-piandohana, miaraka amin'ny tongolo lay, ravina bay, ary chorizo ​​masiaka, mivoaka mba hilelaka ny rantsan-tananao! Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo, izay manampy anay amin'ny fanararaotana tsara ny TM. fiarahabana
Misaotra anao Monica! Tolo-kevitra tena tsara. Faly be izahay fa tianao be io 😉
Monica, apetrakao amin'ny voalohany ny chorizo. Ny tongolo sy tongolo lay sa rehefa ampiana azy? MISAOTRA
Salama, te-hanao an'ity fomba fahandro ity ho an'ny roa aho. Raha apetrako ny antsasaky ny vola dia mitovy ve ny fotoana? Misaotra!
Alicia izany, ora mitovy sy akora mizara roa. Misaotra nanoratra taminay!
Salama, te-hanao ny fomba fahandro ho an'ny olona 6 aho. Azoko atao ve ny manamboatra ny recette indray mandeha, avy eo, manambatra azy amin'ny farany ao anaty lovia ary manafana azy amin'ny lafaoro?
Salama Esther, ireto vola miseho ireto dia ho an'ny olona 6. 🙂
Sensi dia hoy izy:
Salama, te hanontany anao aho raha afaka mahavita io vola io aho, saingy alohan'ny nanampiana ny vary dia natsipiko ny antsasaky ny ron-kena, hanamboarana azy ary indray andro hanao vary indray, ao anaty casserole. ajja afaka ..
Valiny tamin'i Sensi
Heveriko fa hevitra tsara izany Sensi, dia ho tsara tarehy aminao 😉
Gratin atody miaraka amin'ny tuna sy saosy Aurora